Qax ka dhacay New York oo horseeday khasaare dhan $34 bilyan
Malaayiin qof ayaa ka guuray magaalada New York intii lagu guda jiray cudurka Coronavirus, hase yeeshee isla waqtigaas, malaayiin kale oo ah dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa soo degay oo beddelay, sida ay sheegtay daraasad lasii daayey Talaadadii.
Marka la kala jaro, qiyaastii 70,000 oo qof ayaa ka qaxay magaalada iyo magaalooyinka ku hareerysan sanadkan, taasi oo horseeday 34 bilyan oo dollar oo ah dhaqaale ay lumisay magaalada, sida lagu sheegay qiyaas ay sameysay shirkadda Unacast.
Qiyaastii 3.57 milyan oo qof ayaa ka tegay New York City sanadkan, intii u dhaxeysay 1-da Janaayo illaa 7-da December, sida ay sheegtay Unicast oo taxliilin ku sameysay xogta goobta taleefonada mobile ee ay dadkaas adeegsadaan. Isla waqtigaas waxaa magaalada soo degay 3.5 milyan oo qof oo ah dad dhaqaalahoodu hooseeyo.
“Barakaca ka dhacay magaalada uma weyna sida ay dadka qaar uga hadlayeen,” waxaa sidaas yiri Thomas Walle oo ah aas-aasaha iyo madaxa fulinta shirkadda Unacast.
Xaafadda Tribeca, oo ah xaafad qani ah oo ka tirsan magaalad Manhattan, dadka ka guuray waxay dhaqaale ahaan sanadkii sameyn jireen $140,000, sida uu sheegay Walle. “Celceliska dhaqaalaha dadka xaafadda soo degay waa $82,000 sanadkii,” ayuu yiir.
Walle ayaa sheegay in marka la isku daro dadka guuray ee qaniga ah iyo kuwa soo degay oo dhaqaalahoodu yar yahay, ay magaalada u horseedi karto cawaaqib muddo fog ah, xilli ay kasoo kabaneyso burburka dhaqaale ee ka dhashay cudurka Coronavirus.